Maxaad ka ogtahay SEO ku saabsan goobaha cusub?
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ku saabsan SEO-ga saxda ah ee boggaga wararka, sida bogagga internetka ee u baahan in ka badan gaadiidka. Wax walba waxay noqon karaan kuwo fudud, sida iyadoo la adeegsanaayo Mashruuca Raadinta Mashruuc kasta oo kasta boggaga wargeysyada ayaa codsan kara habkan kharash-galka ah ee soo jiidashada akhristayaasha cusub oo cusub oo u rogaya inay dhagaystayaashu sii ballaadhiyaan akhristayaasha taagan. Habkaa, waxaa lagugula talinayaa inaad ku dhajiso kaliya oo cusub oo dhawaan la cusbooneysiiyey. Qoraalkaaga qoraalka waa inuu noqdaa mid wargelin ah oo mar walba gaar ah, taas oo ah meel u dhow SEO-yada loogu talagalay goobaha warbaahintu u baahan yihiin inta badan. Laakiin isku day in aadan codsanin farsamooyinka khadka madow, iyo sidoo kale ka hortagaan qoraalkaaga in laga yaabo in ay ka xishoodaan ereyada muhiimka ah, is-xiiriirinta isku xirka, waxyaabo la duubay iyo wixii la mid ah.
Hoos waxaa ku qoran dhowr talooyin waxtar leh, laga soo eego aragtida SEO ee goobaha wararka. Inta badan waxaa la isku dayay oo isticmaalay-caddeeyay markii aan waayo-aragnimo u leeyahay in aan ka shaqeeyo bogga wargeyska:
Codso naqshadeynta faahfaahinta, maadama search engine algorithms waxay ka mahad celineysaa heerka tayada leh qiimayaasha sare ee SERPs. Sidaa darteed, hodankaagu waa mid hodan ah, buuxa, haboon, marwalba oo cusub, oo lagu taageerayo cinwaano waaweyn oo sharaxaya bogga internetka ee ugu fiican. Waxaad xor u noqotaa inaad ku darto ereyada muhiimka ah ama erayada muhiimka ah ee qoraalka jirka, iyo qoraalka sawirka ee sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, xusuus, si kastaba ha ahaatee, si loo ilaaliyo cufnaanta muhiimka ah ee ku jirta qiyaastii 2 boqolkiiba qoraalka qoraalka oo dhan. Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad had iyo jeer arki kartaa tilmaamaha rasmiga ah ee Google
Sameynta SEO ee goobaha wargeysyada, waa inaad si gaar ah fiiro gaar ah u bixisaa URL-ga marka la abuuro bog kasta. Had iyo jeer hayso jeeg labajir ah si aad uhesho ereyada muhiimka ah ama keyfradaha ku yaala URL kasta oo aad abuurto, halka cusbooneysiinta kuwa hadda jira laga yaabo inay fikrad fiican u yihiin - faa'iido u leh akhristayaashaada, iyo ku haboon inaad ku dhufatid robots search at same time. Sidoo kale, tixgelinta SEO ee goobaha wararka, waxaa lagugula talinayaa inaad ku daboosho URL kasta oo leh lambar gaar ah saddexda lambar ee dhererkiisa.
Oo halkan yimaadaa oo keliya talaabada ugu muhiimsan ee macaamiisha loogu talagalay SEO ee goobaha warbaahinta, markaa waxaad ka fekereysaa waxyaabahan soo socda markaad ku dhejinayso:
Ugu horreyntii, mawduucyada moodada sida news_keywords ayaa ka caawin doona labadaba publisher (in la ogaado oo loo kala saaro xogta weyn), iyo sidoo kale akhristayaasha dhabta ah (samaynta fududaynta dib u eegida ama la wadaagaan macluumaadka, tusaale ahaan , iyada oo loo marayo hababka xiriirka bulshada)
Xusuusnow, xuruufta kaliya ee loo ogol yahay URL-yadaada iyo qoraallada meta waa masiibo. Isticmaal keliya si aad u kala soocdo ereyada muhiimka ah iyo jumladaha muhiimka ah.
Inta badan ereyada muhiimka ah ee halkan ku yaal waxay u muuqdaan inay qiimo isku mid ah leeyihiin, waxaan ula jeedaa markaan tixraacayo SEO-ga goobaha wararka
Mid ka mid ah qaababka ugu wax ku oolka ah halkan waa ikhtiyaarka loo isticmaalo ilaa 10 ereyo muhiim ah sida ereyada, e. g. , si aad u sameysid qoraal cusub oo cusub oo daabacan. Sidaa oo kale, marwalba marwalba waxaad haysataa laba-dhibcood oo xawli ah: Haddii ay dhacdo in maqaal shakhsiyeed uu caddaynayo inuusan ku xirnayn mawduuca, isticmaalayaashu waxay si dhakhso ah u tilmaami karaan hagaajin ku dhow Source .